Owezempilo ukhuthaza abesifazane ngokuzivikela
KUDONSWE ngendlebe abesifazane ukuthi basebenzise amakhondomu ukuze bazivikele ezifweni zocansi, kumdlavuza wesibeletho nasekukhulelweni okungahleliwe
BONISWA MOHALE | August 27, 2019
UNGQONGQOSHE wezeMpilo KwaZulu-Natal uNkk Nomagugu Simelane-Zulu ugqugquzele abesifazane ukuthi bahlele umndeni ngoba baningi abakhulelwayo bengahlelile.
“Asikho isidingo sokuthi abesifazane bakhulelwe bengahlelile ngoba uhulumeni unezinhlelo zokuhlela mahhala kuyo yonke imitholampilo. Ukuhlela umndeni kunezinhlobo ezehlukene ngoba kuvela ukuthi abesifazane abathandi ukusebenzisa amakhondomu. Siyacela ukuthi abahambe bayojova, badle amaphilisi noma basebenzise ezinye izindlela zokuhlela esinazo njengomnyango,” kusho uNkk Simelane-Zulu ekhuluma emcimbini wabesifazane obuseGreyville, eThekwini, muva nje.
Ukhale ngokuthi abesifazane abancane bafike bakhulelwe bengahlelile bese behluleka nawukunaka izingane zabo.
Iningi labo uthe lizishiya nogogo nakomakhelwane uma seliyophuza utshwala ngezimpelasonto.
Ucele abesifazane ukuthi bazihlole isimo sabo sempilo ngaso sonke isikhathi ukuze bahlale bephilile.
Udonse ngendlebe abesifazane abancane ukuthi bawasebenzise amakhondomu ngoba ngaphandle kokuvikela ukukhulelwa ayazivikela nezifo zocansi.
“Ngeke ube nesiqiniseko sokuthi umuntu othandana naye uhamba kuziphi izinkalo ngakho kubalulekile ukuthi niye ocansini oluphephile ngaso sonke isikhathi. Siyadinga ukuthi sikhulume ngezinto ezithinta abesifazane ngqo nempilo yabo. Kuyashaqisa ukuthi yibona abangazwani nocansi oluphephile,” kuqhuba uNkk Simelane-Zulu.
Uveze ukuthi ucansi oluphephile luyasiza ukuvikela abesifazane nakumdlavuza wesibeletho.
Uphinde wakhuza abesifazane ngokudla izidakamizwa ethi kudingeka isithangami nezindlela zokulwa nalo mkhuba.
Uphethe ngokuthi ufuna ukubona abesifazane begxila kwezemfundo, besungula namabhizinisi ukuze kuliwe nezinga eliphezulu lokushoda kwemisebenzi eNingizimu Afrika.
“Sifuna ukubona abesifazane bezivulela izinkampani zabo kodwa kubalulekile ukuthi bathi becabanga ngebhizinisi babe becabanga nempilo yabo. Abakwazi ukuthuthukisa umnotho uma bengaphilile kahle ngakho abazihlole isimo sabo sempilo. Abasheshe bathole usizo uma kukhona okungabaphethe kahle.”